ISandals Resorts International ikhumbula umsunguli uGordon "Butch" uStewart
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » ISandals Resorts International ikhumbula umsunguli uGordon "Butch" Stewart
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
ISandals Resorts International ikhumbula umsunguli uGordon "Butch" Stewart
Ukuhlonipha uMsunguli weSandals Resorts wamanye amazwe kunye noSihlalo ongasekhoyo, zonke iiNdawo ekuchithelwa kuzo iiSandals kunye neelwandle Resorts ziya kuthi ngokuzingca zibonise ifoto equlunqwe ngokukodwa ye-Hon. Gordon "Butch" uStewart njengesikhumbuzo selifa lakhe laphakade.
ISandals Resorts International (i-SRI) izakukhumbula ubomi bomseki ongasekhoyo kunye nosihlalo uGordon “Butch” Stewart kuthotho lwezinto ezenzeka kwipropathi nakwizinto zedijithali ezibekelwe ixesha lokuhlonipha umhla wokuzalwa kukaMnu Stewart kaJulayi 6.
IiSandals Resorts zibhengeza izicwangciso eziyilelwe ukuhlonipha umsunguli ngomhla wakhe wokuzalwa kaJulayi 6.
Kuza kutyhilwa “uLwandle oLwandle” kwindawo nganye enendawo eneembono ezintle zokukhumbula u-Hon. Uthando lukaGordon “Butch” Stewart lolwandle.
Indawo nganye nganye iyakufumana ifoto yomsunguli enokubukelwa ziindwendwe, amalungu eqela kunye neendwendwe.
Kwipropathi, indawo nganye nganye iya kuboniswa ifoto yomsunguli eya kuthi iboniswe kwindawo ebonakalayo yokujonga iindwendwe, amalungu eqela, kunye neendwendwe. Ukongeza, indawo nganye nganye iya kwazisa Ukujonga uLwandle, indawo ethandwayo echongiweyo kwihotele nganye eyayikhethekile kuMnu Stewart ngeembono zayo ezintle zolwandle. Yonke Ukujonga uLwandle Uza kukhatshwa lityala elibhalwe lo mbhalo ulandelayo: “'Umbono wam wobutofotofo uselwandle… '-Gordon “Butch” Stewart, uMseki, iiSandals Resorts. Njengokuba kwakunjalo kumsunguli wethu, ngamana iiCaribbean zingangumthombo ongapheliyo wenkuthazo, uxolo kunye novuyo olumsulwa. ”
IiSandals Resorts International ziya kutyhila i "Ocean Lookout" kuzo zonke iiholide zayo ngaphesheya kweCaribbean - indawo ekhethekileyo eneembono ezintle - ukukhumbula u-Hon. Uthando lukaGordon “Butch” Stewart lolwandle. Kuboniswe apha: iimbono zolwandle ezingapheliyo eSandals Ochi Beach Resort ebekwe eOcho Rios, eJamaica, kufutshane nalapho uGordon "Butch" uStewart akhulele khona.
"Ezi ziindlela ezincinci zokuhlonipha izinto ezinkulu ezazibalulekile kutata," utshilo usihlalo we-SRI u-Adam Stewart. “Umfaniswano katata, obonakaliswe ngembeko kwiindawo zethu zokuhlala, kubalulekile. Ibonisa umhlaba ukuba ngasemva kweemveliso zethu, siyinzala yesithandathu yesapho laseJamaican elineengcambu ezityalwe ngokuqinileyo kwiCaribbean. Yiyo loo nto ukuseka indawo eneembono ezintle zolwandle kwakubaluleke kakhulu. Yonke into esiyenzayo iqala apho ulwandle luhlangana khona nentlabathi. Ngaphandle kokuba yinkokeli yezokhenketho, utata wam wakhulela elunxwemeni kwaye wayonwabela izinto ezilula ebomini. Wayekuthanda ukungqongwa lulwandle, encokola nabahlobo kwaye edlala needomino. Usapho kunye neCaribbean singobani, kwaye wasinika loo nto. Ngapha koko, enye yezona zinto wayezithanda 'yayikukufuna ukuba iindwendwe zethu zizive ngathi zilusapho xa zikunye nathi.' Namhlanje, sithatha lo mzuzu ukumbhiyozela nokuhlonipha indlela aphoswe ngayo, ”utshilo uStewart.
Abo balandela iimveliso zedijithali amajelo baya kuba nethuba lokuva iingcinga zikaGordon "Butch" Stewart ngawakhe amazwi kwaye bafunde ngakumbi ngobomi bakhe ngokundwendwela "Ukukhumbula uGordon "Butch" uStewart, iphepha elikwi-intanethi elibhiyozela amabali, ifuthe kunye nokukhumbula kwalo mboni uyinyani.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals® Resorts zibonelela ngothando ngabantu ababini abathandana kakhulu, amava eholide eNtofontofo ebandakanyiweyo eCaribbean.
Izicwangciso ezili-15 ezimangalisayo zonxweme eJamaica, eAntigua, eSaint Lucia, eBahamas, eBarbados, eGrenada, kunye ne-16th Indawo eza kwiCuracao Spring 2022, iiSandals Resorts zibonelela ngokubandakanywa komgangatho ongaphezulu kwayo nayiphi na enye inkampani eplanethi.
Utyikityo lothando lweNest Butler Suites® olokugqibela kubucala nakwinkonzo; iingcibi eziqeqeshwe liGuild of Professional English Butlers; iRed Lane Spa®; Indawo yokutyela ye-5-Star Global Gourmet ™, eqinisekisa ukuba utywala busengaphezulu, iwayini yeprimiyamu kunye neeresityu ezikhethekileyo ze-gourmet; Amaziko e-Aqua anesiqinisekiso se-PADI® kunye noqeqesho; I-Wi-Fi ekhawulezayo ukusuka elunxwemeni ukuya kwigumbi lokulala kunye neembadada ezenziwe ngeembadada zizo zonke iiSandals Resorts.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziqinisekisa iindwendwe ngoxolo lwengqondo ukususela ekufikeni kwazo ukuya kumka nazo Iiprotocol zePlatinam zoCoceko, impilo kunye nokhuseleko amanyathelo enkampani enzelwe ukunika iindwendwe ukuzithemba okukhulu xa zisiya eholideyini kwiCaribbean.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziyinxalenye yentsapho enabanini Iimbadada zeembadada I-International (SRI), eyasekwa ngongasekhoyo uGordon “Butch” Stewart, ebandakanya iiBeaches Resorts kwaye iyinkampani ephambili yezokhenketho eCaribbean. Ngolwazi oluthe kratya malunga neeSandals Resorts Luxury Included® umahluko, ndwendwela www.sandals.com.